देशकै पहिलो निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष घलेको के छ योजना ? - Narayanionline.com Narayanionline.com देशकै पहिलो निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष घलेको के छ योजना ? - Narayanionline.com
‘अघिल्लो पटक गरेको कामका कारण यस पटक पनि चामेवासीले अध्यक्ष निर्वाचित गरिदिनुभयो । म फेरि, पनि उहाँ ९चामेवासी० हरूकै सेवामा समर्पित हुन्छ । चामेको विकासमा केन्द्रित हुन्छ । उहाँहरूलाई धन्यवाद छ’, न्युज कारखानासँग कुराकानी गर्दै भने ।